Wararkii ugu Dambeeyay Shirar gaar gaar ah ee ka socda Dhuusamareeb oo u socda madaxda DFS iyo Madaxda dowlad goboleedyada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu Dambeeyay Shirar gaar gaar ah ee ka socda Dhuusamareeb oo u socda madaxda DFS iyo Madaxda dowlad goboleedyada
Kulankii u horreeyay oo u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa xilligan ka socda Xarunta Madaxtooyada Dhuusamareeb.
Kulankan oo ah mid hordhac ah ayaa ka socda Xafiiska Madaxweynaha Galmudug, iyadoo kulankan uu ka dambeeyay kulamo hordhac ah oo saacadihii la soo dhaafay si gaar gaar ah ugu dhaxeeyay Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad goboleedyada.
Dhanka kale Waxaa saacadihii u dambeeyay ka socday magaalada Dhuusamareeb kulamo gaar gaar ah oo u dhaxeeyay Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad goboleedyada, kulamadan ayaa ahaa kuwo hordhac u ah kulanka weyn ee ay yeelanayaan DFS iyo Dowlad Goboleedyada.
Sida wararku sheegayaan kulamada qaar ayaa ahaa kuwo xal looga gaarayay khilaafka sida gaarka ugu dhaxeeyo dowladda Federaalka iyo dowlad, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan albaabada u xirnaa xalay la qaatay Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweynaha Jubbaland, waxaana kulankan looga hadlay arrinta doorashada iyo khilaafka labada dhinac sida murankii ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe ee dowladda Federaalka horay u diidneyd inay aqoonsato hase yeeshee markii dambe Madaxtooyada ay siisay aqoonsi labo sano ah, Madaxweyne KMG u Aqoonsatay Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa jiray kulan xalay saqdii dhexe dhex maray Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo 5-ta Madaxweyne Dowlad Goboleed, waxaana la sheegayaa in kulankan looga hadlay sidii is faham looga gaari lahaa kulanka soo socda iyo ajande ka isku raacsan yahay.
Labo aragtiyadood ee shirarka socda harreeyay ayaa kala ah nooca doorashada dalka aadayo, waxaana Madaxweynaha uu gadaal ka riixaya Doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda, taasoo Dowlad goboleedyada ay sheegayaan in aysan taas suuragal aheyn, xaalada dalka ku jiro darteed iyo in aanay diyaar aheyn farsamadii doorashadaas lagu geli lahaa sida dadka oo aan weli la diiwaangelin.
Aragtida kale ayaa ah doorasho dadban oo ay doonayaan Maamul Goboleedyada, taasoo iyana Madaxweyne Farmaajo diidan yahay.
Xisbiyada Siyaasadda ayaa sheegaya in doorashada qof iyo cod oo uu Madaxweynaha doonayo ay ku hoos jirto muddo kororsi, taasoo aanay raalli ka noqoneyn.
Si kastaba ha ahaatee waxaa illaa hada caddeyn xilliga uu furmi doonto kulanka weyn ee u dhaxeeya Madaxda DFS iyo kuwa Dowlad Goboleedyada, waxaana la filayaa kulamada gaar gaadka ee wada xaajoodka inay sii socdaan, illaa labada dhinac is faham ka gaaraan ajandayaasha shirka ku furmi doono.
Wararkii ugu Dambeeyay Shirar gaar gaar ah ee ka socda Dhuusamareeb oo u socda madaxda DFS iyo Madaxda dowlad goboleedyada was last modified: July 20th, 2020 by Admin
Waddooyinka Muqdisho Oo Xiran Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Xaalada magaalada Muqdisho